Eye Warming Massager EHSW50: Buy Sell Online @ Best Prices in Myanmar | Shop.com.mm
Eye Warming Massager EHSW50
More Skin Care from Panasonic
Advanced Vision Co. Ltd
Product details of Eye Warming Massager EHSW50
အပူအအေး ၂ မျိုးပြောင်းသုံးနိုင်ခြင်း
တုန်ခါမှုနှုန်းကို ၂ မျိုးအရွေးချယ်နိုင်
အားပြည့်ရန်အချိန် ၁ နာရီသာလိုအပ်ခြင်း
Specifications of Eye Warming Massager EHSW50
?????????????? ???????? EHSW50
Ratings & Reviews of Eye Warming Massager EHSW50
အကြောတက်တာပါ တကယ်သက်သာလို့ အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။
by Nu N.
Easy use. Comfortable feeling. I use this Panasonic massager before sleep. It helps me go to sleep faster.
ဒီမျက်စိအကြောပြေနှိပ်စက်လေး တစ်နေကုန်ကွန်ပြူတာကို ကြည့်ရတဲ့ ရုံးသူရုံးသားများအတွက်တော့ အင်မတန်သင့်လျော်တဲ့စက်ကလေးပါပဲ။
ကျွန်မက မျက်မှန်တပ်ရတဲ့အပြင် အမြဲကွန်ပြူတာကြည့်ရတဲ့ သူမျိုးပါ။ မျက်လုံးညောင်းတဲ့ ပြသနာကတော့ နေ့တိုင်းလိုလိုကြုံနေရတာပဲ။ ဒါပေမယ့် Panasonic ရဲ့ ဒီအကြောဖြေနှိပ်စက်လေး ဆောင်ထားပြီးနောက်ပိုင်း မျက်လုံးညောင်းတဲ့ ပြသနာမရှိတော့ဘူး။ အရမ်းကောင်းပါတယ်။
Panasonic ကတော့ ပြောစရာမလိုအောင် ကောင်းပြီးသားပါ/ ဒီ massager လေးက အရမ်းအကြောဖြေလို့ကောာင်းတယ် .. ကွန်ပြူတာသမားတွေအတွက် အရမ်းဆင်ပြေတယ် ...တနေကုန်ညောင်းသမျပြေသွားတယ် နေ့တိုင်း သုံးဖြစ်နေတယ် ခုဆို ...အရမ်းကြိုက်ပါတယ်လို့